WARBIXIN: Miyay Arsenal Oo Soo Gabagabayn Doontaa Rekoodhka Xun Ee Old Traffrod Ka Yaal? | CeelSheekh News
(Ceelsheekh-London)-Kooxda Arsene Wenger ee Arsenal ayaa sabtida Old Traffrod ku booqan doonta kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Manchester United, waxaana xili ciyaareedkan kulankan xiiso badan u sii yeelaya in Jose Mourinho uu macalin u yahay Red Devils isla markaana ay colaadii Wenger iyo Mourinho dib uga bilaami doonto Old Traffrod.
Laakiin Arsenal ayay hoyaalaan laba dhibaato oo aad u waa wayni, oo kala ah rekoodhka xun ee ay ku leedahay garoonka Man United ee Old Trafford iyo waliba rekoodhka liita ee uu Arsene Wenger ka haysto dhigiisa Jose Mourinho. Tan iyo markii horyaalka Ingiriiska loo bixiyay magaca Premier Leaque-ga ee xili ciyaareedkii 1992/93 ayay Arsenal saddex guulood oo kaliya oo premier Leauqe-ga ah ay ku soo gaadhay Old Traffrod.
Manchester United versus Arsenal fixtures have produced only eight red cards in the history of the Premier League
Wuxuuna Old Traffrod noqday garoonka ugu dhibta badan Arsenal iyada oo celcelis ahaan kulankiiba ka soo heshay 0.63 dhibic waana rekoodh la mid ah dhibcaha celcelis ahaanta ay kaga soo heshay kooxda Sheffield Wednesday. Tan iyo xili ciyaareedkii 1992/93 Arsenal ayaa Old Traffrod booqatay 24 kulan waxayna soo guuldaraysatay 15 kulan oo ka mid ah, lix kulan ayay barbaro soo gaashay halka ay 3 kulan soo guulaystay laakiin saddexda kulan ee ay guulaystay ayaa yimid saddex xili ciyaareed oo ay Gunners koobka qaaday.
Kulamada Arsenal ee martida
JOSE MOURINHO VS ARSENE WENGER:
Tababare Arsene Wenger ayaan wali hal kulan oo Premier Leaque-ga ah ka guulaysan Mourinho inkasta oo ay iska horyimaadeen 11 kulan oo horyaalka Ingiriiska ah muddadii uu Chelsea joogay. Mourinho ayaa shan kulan oo Premier Leaque-ga ah garaacay kooxda Arsene Wenger ee Arsenal wuxuuna barbaro la galay 6 kulan, sidaa daraadeed wali muu arkin sida ay tahay guuldaro uu Wenger kagala kulmo Premier Leaque-ga.
Jose Mourinho (right) and Arsene Wenger will go head to head once again on Saturday
Guushii abid ugu horaysay ee uu Wenger ka gaadhay Mourinho ayaa ahayd kulankii Community Shieldka ee la ciyaaray bishii August 2015 markaas oo uu ugu danbayn Wenger guul u sheegtay Mourinho. Laakin rekoodhka liita ee uu Wenger ka haysto Mourinho iyo waliba rekoodhka ka sii xun ee ay kooxdiisa Gunners ka haysato Old Traffrod ayaa ah mid walwal badan ku keenaya macalinka ree France.
Since Mourinho’s arrival in the Premier League in 2004, the Portuguese has won 65 per cent of his league matches
SAAMAYNTA GARSOORE ANDRE MARRINER:
Waxaa kulankan loo doortay in garsoore Andre Marriner uu dhex dhexaadiyo Manchester United iyo Arsenal laakiin rekoodhkiisa xili ciyaareedkan ayaa ah mid aad u fiican isla markaana aan walwal badan keenayn. Andre Marriner ayaa xili ciyaareedkan soo qabtay 8 kulan wuxuuna soo bixiyay 29 kaadh oo digniin ah iyo hal kaadh casaan oo uu siiyay xidiga kooxda Hull City ee Ahmed Elmohamady ee kulankii Liverpool.
Andre Marriner will be in charge of Man Utd against Arsenal, live on Sky Sports
Marriner ayaa sideedii kulan ee uu Premier Leaque-ga xili ciyaareedkan soo qabtay kooxaha ku abaal mariyay afar rekoodhe halka uu dhigay 163 qalad oo ay ciyaartoyda kooxaha uu dhex dhexaadinayay ay kala galeen taas oo ka dhigaysa in uu celcelis ahaan kulankiiba qabtay 5.3 qalad oo ay ciyaartoydu galeen.
XOGTA GARSOORKA PREMIER LEAQUE-GA EE XILI CIYAAREEDKAN: